New Thermomix TM5 | Usoro ọgwụgwọ
Akwụkwọ Ntụziaka Thermomix
Dessert Ezi ntụziaka na Thermomix
Isi nri dị mma na Thermomix
Gosipụta Ezi ntụziaka na Thermomix
Gosipụta Ezi ntụziaka 2 na Thermomix
Ntụziaka pụrụ iche na Thermomix
Akwụkwọ dị n'otu na ịde blọgụ na nri
Osikapa na onyinye
Ihe ọụụ na ihe ọicesụ juụ
Salads na akwukwo nri
Mgwakota agwa na achịcha
Jams ma chebe
Shoplọ ahịa achicha
Ofe na ude
Ntụziaka pụrụ iche
Lactose anaghị anabata ndidi
Nke oge ọkọchị
Erughị 15 nkeji
Erughị 30 nkeji
Erughị 1 awa
Ihe na-erughị 1 hour na 30 min
Ihe karịrị 1 hour na 30 min
Gịnị bụ Thermomix?
Zụrụ Thermomix TM5
TM5, TM31 na TM21 ịha nhata
Thermomix na MyCook
Banye o debanye aha ma nwee obi ụtọ ThermoRecipes
New Thermomix TM5
Mayra Fernandez Joglar | | General
Taa, Mọnde, a na-ere ihe ọhụrụ na Spain. New Thermomix TM5 nke emere na Fraịde n’ụwa nile site na Emeka
Na a kichin kichin ha ka mma atụmatụ dị iche iche nke ama nlereanya TM31 iji gbanwee maka mkpa nke ndị ọrụ.
Mana ka anyị gabigara akụkụ:
1 Gịnị ka ha gbanwere?
2 Na ego?
3 Achọrọ m ịzụta Thermomix TM5
Gịnị ka ha gbanwere?
Ewezuga mmezigharị ergonomic na emelitere, Vorwerk emeela mgbanwe dị iche iche dị ka Varoma na na iko ndị nwere a nke buru ibu. Ọ bụghị na ọdịiche dị oke, mana ọ ka mma maka ezinụlọ buru ibu. Varoma ọhụrụ nwere ikike nke lita 3,3 na iko nke lita 2,2.
Iko na urukurubụba emelitewokwa. Imewe yiri nnọọ ma oge a ka mma ịrụ ya ọrụ.
Ebe enwere mgbanwe di ukuu di na mkpuchi onye mmechi ya na New Thermomix TM5 ọ ga-abụ akpaka. Nakwa na onye na-ahọpụta okpomọkụ, ugbu a na-enwe ike esi nri na 120º. Injin ahụ ga-eme obere mkpọtụ ma mkpọtụ ịdọ aka na ntị ga-adị iche na nke ugbu a.
Ihe ohuru bu na o nwere ihuenyo mmetụ agba na otu ihe nhọta site na ebe ị nwere ike ijikwa oge, okpomọkụ na ọsọ.
Ma enweghị a doro anya na oké ọganihu kemgbe ya usoro nke Edu Ndu. Ọ bụ ngwaọrụ nwere n'akụkụ nke ị nwere ike itinye Thermomix Digital Books. Ngwaọrụ ahụ ga-egosiputa ntuziaka nke usoro ahụ na-akpaghị aka, na-agbanwe ma ọnọdụ okpomọkụ ma oge. N'ụzọ dị otú a, ndị ọrụ ga-agbakwunye naanị ihe ndị ahụ ma megharịa njikwa ọsọ.
Ekwenyesiri m ike na ndị ọrụ ọhụụ ga-ahụ ihe ọhụụ ndị a niile n'anya mana kedu maka ndị anyị nwere ndị ọzọ ụdị?
Ndị anyị nwere ụdị TM31 agaghị echegbu onwe gị n'ihi na usoro na akwụkwọ nri bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara. Ọ ka nwere ntụgharị aka ekpe, ọnụ ọgụgụ na ọsọ ọsọ, ọ bụ ezie na ugbu a, ha kpọrọ ya "ọrụ na-eme ka a gwakọtara".
Ọ ga-adabere na mba ọ bụla na ego ya. N'ebe a na Spain, ọnụahịa ga-abụ 1100 € na ga-agụnye isi igwe, iko igwe anaghị ata nchara, nkata, urukurubụba na spatula, varoma na akwụkwọ dijitalụ nke nwere akwụkwọ nri 197 nke na-anọchi "Mkpa" ma nwee isiokwu "Isi nri dị mfe ma dịkwa mma".
Achọrọ m ịzụta Thermomix TM5
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta Thermomix TM5 ọhụrụ ahụ ị ga-abanye na ngalaba ahụ Zụrụ Thermomix TM5 ma ọ bụ pịa njikọ na-esonụ.
THERMOMIX TM5 na onye ọ bụla ...
Olileanya na-amasị gị ihe nlereanya ọhụrụ a!
Chọpụta ntụziaka ndị ọzọ nke: General
Pathzọ zuru ezu na edemede: Thermorecetas » Isiokwu » General » New Thermomix TM5
Anata Ezi ntụziaka na m email
Anyị bipụtara akwụkwọ mbụ anyị !!
Ntụziaka kachasị mma iji mee ka anyị banye n'ụsọ osimiri na ọdọ mmiri
Otu esi emepụta blọgụ isi nri
Denye aha na Thermorecetas
Onyinye ohuru na Thermorecetas! Nweta akwụkwọ anyị na € 50 na Amazon
Na -ekere òkè!